China Sandblast Glass Ubuhlalu 120 # Ukwenziwa kunye nefektri | OLAN
I-Sandblasting Glass Bead eneempawu zobunzima obuthile, amandla kunye nokuzinza kweekhemikhali. Zenziwe ngeglasi yesalikhi yesoda kwaye zinokusetyenziswa njengezixhobo zokuqhushumbisa ukususa iintlobo ezahlukeneyo zokungafezeki komphezulu, kubandakanya ukucocwa kwesinyithi, ukugqitywa komphezulu, ukukroba, ukungxama. Ithoba ukubonakala kwawo nawuphi na umonakalo onokubakho, ukukrwela, ukukhubazeka okuncinci emva kokuwelda, ukugaya, okanye ukuwelda indawo kwaye inyusa ukunganyangeki kwemveliso kunye nokunceda ekwandiseni amandla okunxiba.
Ukuqhaqha i-Glass ye-Glass akufanelekanga kuphela kunyango lokugqibela lwemveliso entsha okanye njengonyango lwangaphambi kokuba kwenziwe iinkqubo zamachiza (i-electroforming, i-anodic oxidation), iphefumla ubomi obutsha kwizinto ezindala, nokuba zizinto zemoto, ubugcisa kunye nezinto zokuhombisa okanye izinto zangaphakathi.
Ukuqhakaza ngeeglasi zeglasi phantsi koxinzelelo kuya kugcina iimveliso ngaphandle kotshintsho lobukhulu, ngaphandle kongcoliseko nangaphandle koxinzelelo olukhulu. Ivelisa ukugqitywa komhlaba okucocekileyo. Izinto eziqhelekileyo zokuqhumisa ezinje ngeAluminiyam iOxide, Isanti, iShots Shots ziya kushiya ifilimu yemichiza kumhlaba oqhumayo okanye zisike amanyathelo. Ubukhulu beglasi ngokubanzi buncinci kwaye bukhaphukhaphu kuneminye imithombo yeendaba kwaye bunokusetyenziselwa ukukroba kwi-radii ebukhali yemisonto kunye neendawo ezibuthathaka apho kufuneka amandla aphantsi kakhulu. Ukuqaqanjelwa ngeglasi yeglasi kulungisa ngokupheleleyo umphezulu wentsimbi kulo naluphi na uhlobo lwengubo kuyo enjengokupeyinta, ukuxhoma i-enameling okanye i-glass lining. Izibonelelo ezongezelelweyo zeglasi yokukhwabanisa iiglasi zibandakanya ukuba ungayisebenzisa kwimijikelezo embalwa ngaphambi kokuba ingasacoceki umphezulu. Kuqhelekile ukuba imithombo yeendaba yeglasi igqitywe ukujikeleza imijikelezo emi-4 ukuya kwemi-6 ngaphambi kokufuna ukutshintshwa. Okokugqibela, ubuhlalu beglasi bunokusetyenziselwa ukutsala okanye uxinzelelo kwikhabhinethi. Oku kuyenza ibe bhetyebhetye kwaye kunokunceda ukubonelela ngomsasazo wokucoca iindaba ogcina iindleko zekhabhinethi yakho ziphantsi.
Iibhola zeglasi ezisetyenziswe njengezixhobo zokuqhuma zinempawu zokucaca, ubunzima kunye nobunzima. Zikulungele ukucoca nokucoca i-burrs kunye nokungcola kwiindawo ezahlukeneyo zokubumba ukuze amanqaku aqhubekileyo abe nokugqiba kakuhle kwaye andise ubomi babo benkonzo. Ubume beekhemikhali zeglasi zeglasi azifakwanga kwaye azinetyhefu, ngexesha lokusetyenziswa, akukho ntsimbi okanye ezinye izinto eziyingozi zihlala kumphezulu womsebenzi, kwaye aziyi kuchaphazela kakubi imeko-bume engqongileyo. Ukujikeleza komphezulu ogudileyo kwenza ukuba kungabikho monakalo wokuqala kukuchaneka koomatshini bokwenza umsebenzi ngexesha lenkqubo yesanti. Esinye isicelo esisodwa sokwenza i-glass bead blasting is peening, esinceda isinyithi kangcono ukumelana nokukhathala kunye nokuqhekeka kwi-corrosion. Olunye uphononongo lufumanise ukuba lunokunyusa amandla okukhathala malunga ne-17.14%. Ikunika ukugqitywa kwesatin ngelixa ukonyusa ukuzinza kwemveliso.
Main iimveliso imigaqo sandblasting ngokwetafile elandelayo:
Hayi. Ububanzi (um) Ubungakanani beesefa ehambelanayo
6 Ngama-75-45 200-325
Unokukhetha ubungakanani beglasi yeglasi eyahlukeneyo phakathi kwe-45um-850um ngokomsebenzi owahlukileyo.
Amandla aphakamileyo eGlasi yeGlasi (yokuqhumisa)
Ngomoya ocinezelweyo njengamandla angenanto, le mveliso yenziwa ngokufafaza ubuhlalu phantsi kwesantya esiphezulu noxinzelelo kumphezulu womsebenzi wokukroba nokupholisha.
Ezinye iinjongo zeemveliso zezi zilandelayo:
1.Sula ukungunda okungafaniyo kwempembelelo, ukubumba, iglasi, irabha kunye neplastikhi, ukwenza isinyithi kunye nokukhutshwa.
2. Ukuphelisa uxinzelelo oluqinileyo, ukwandisa ukudinwa kunye nokunyusa uxinzelelo lomhlwa. Umzekelo, i-injini yeenqwelomoya, i-vane, ishafti, ukuhanjiswa ngaphantsi, imithombo eyahlukeneyo kunye neegiya, njl.
3. Coca kwaye ususe i-slitter edge kunye ne-burr kwipleyiti yesekethe kunye neplastikhi etywiniweyo ye-geminate transistors ngaphambi kwe-stannum soldering
4. Susa iziqu kwipiston kunye nesilinda kwaye ubonelele ngombala oqaqambileyo kunye nesiqingatha sokungabikho kwezixhobo zonyango kunye neenxalenye zemoto.
5. Cacisa i-electromotor kunye nezinye izinto ezinje nge-loop, ibrashi yombane kunye ne-Rotor ye ngexesha lokulungiswa okunzima
6. Coca kwaye ususe i-burr yetyhubhu yesinyithi kunye netyhubhu yentsimbi engeyiyo eyonyibilikileyo. Isetyenziselwa ukukhulisa ukukhula kunye nokuphola kwamalungu oomatshini bempahla.
Amandla aphakamileyo eGlasi yeGlasi yokuqhumisa
Chwetheza Unxweme Ubungakanani beenkozo μ m
280 # 200-325 Ngama-75-45
Egqithileyo I-Sandblast Glass Ubuhlalu 150 #
Okulandelayo: I-Sandblast Glass Ubuhlalu 100 #
Imithombo yeendaba yeGlasi yeBandblasting
Iibhola zeglasi zeSabboss Sandblasting
Iibhola zeglasi zeenjongo zeSandblasting
Iibhola zeglasi ze-Sandblasting
Iibhola zeglasi ezibonakalayo zento ebonakalayo
Iibhola zeglasi zokubonelela ngeempahla
Iibhola zeglasi zisetyenziswe kumatshini weSandblasting
Microspheres yeglasi yeSandblasting
Ubunzima 6-7 Mohs Sandblasting Glass Beads
Iibhola zeglasi zeSandblast
Umzi-mveliso we-Sandblasting Beads e-China
I-Aluminium Coated Glass Ubuhlalu (1.93nd)
Ukugaya ubuhlalu beglasi 4.0-5.0mm
Ukugaya ubuhlalu beglasi 0.8-1.0mm
Iimpawu zeGlasi zeBlue 6-9mm